News – Hi Internet of Horizon Telecom International
Hi-Internet ကိုအသုံးပြုနေကြသော Customers များ ခင်ဗျာ….
Hi-Internet အနေဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးနိုင်ရန်အတွက် DATA CENTER တွင် အဆင့်မြင့်တင်ခြင်း လုပ်ငန်းများ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသဖြင့် 5/7/2022 အင်္ဂါနေ့ည ၁၀နာရီ မှ 6/7/2022 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နံနက် ၆နာရီ အတွင်း ယာယီလိုင်း ပြတ်တောက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ လူကြီးမင်းတို့အနေဖြင့် 6/7/2022 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နံနက် ၆ နာရီ နောက်ပိုင်းအထိ အင်တာနက်လိုင်းပြန်လည်မရရှိသေးပါက မိမိတို့စက် ကို Power အပိတ် အဖွင့် ပြုလုပ်ကာ ပြန်လည်အသုံးပြုပေးပါခင်ဗျာ။
အင်တာနက်လိုင်းပြန်လည် မရရှိပါက Hotline 09 966 666 644 သို့ဖြစ်စေ၊ Hi-Internet Page Messenger သို့ဖြစ်စေ ၆-၇-၂၀၂၂ နံနက် ၈ နာရီနောက်ပိုင်းတွင် ဆက်သွယ်၍ အကူအညီရယူနိုင်ပါသည်။
လူကြီးမင်းတို့ အဆင်မပြေမှုများအတွက် Hi-Internet မှ အနူးအညွှတ်တောင်းပန်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
#Hi_Internet #Horizon_Telecom #FTTH #Fiber_Internet #Premium_Broadband #Home_Broadband #Internet_Issues #Upgrade #Update
Hi-Internet ရဲ့လစဥ်ကြေးကို KBZ-Pay နဲ့ အလွယ်တကူတိုက်ရိုက်ပေးချေလိုက်ပါ
1. ရှေးဦးစွာ လူကြီးမင်းတို့ နှစ်သက်ရာ နည်းလမ်းမှတစ်ဆင့် Invoices သို့ဝင်ရောက်ပါ… 2. ထို့နောက် Payment ကို နှိပ်ပါ… 3. KBZ-Pay ကို ထပ်မံ ရွေးချယ်ပေးပါ…. 4. KBZ-Pay Application သို့ဝင်‌ရောက်ရန် Yes ကိုနှိပ်ပေးပါ… 5. Pay Now ကိုနှိပ်၍ မိမိKBZ-Pay Account၏ Pin No. ကိုရိုက်ထည့်ပြီး ငွေပေးချေမှုကိုအောင်မြင်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါပြီ…
Hi Internet ရဲ့ Customer portal နဲ့ ဆို အလွယ်တကူ မိမိ Invoice ကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။
ဘေလ်ဆောင်ဖို့ sms တောင်းနေရတုံးလား Hi Internet ရဲ့ Customer portal နဲ့ ဆို အလွယ်တကူ မိမိ Invoice ကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။ Customer portal တွင် User ID ဖြင့် Login ဝင်နိုင်ခြင်း။ မိမိ Password အား ပြောင်းလဲ အသုံးပြုနိုင်၍ မိမိ အချက်အလက်များကို ပိုမို လုံခြုံစွာ အသုံး ပြိုနိုင်ခြင်း။ မိမိ ပေးဆောင်ရန် ကျန်ရှိသော ဘေလ်တောင်းခံလွှာများအား အလွယ် တကူ ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း။ မိမိ ပေးဆောင်ပြီးသော ဘေလ်များကို အလွယ်တကူကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း။ Complain ticket များအား အလွယ်တကူ တင်နိုင်ခြင်း။ မိမိ user information နှင့် အင်တာနက်လိုင်း အခြေအနေများအား အလွယ်တကူသိရှိနိုင်ခြင်း။ ဒါတွေကြောင့် Hi Internet ရဲ့ Customer Portal ကို ဝင်ကြည့်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။ Customer Portal ကို ဝင်ကြည့်ဖို့ Link - https://selfcare.hti.net.mm/ User ID – ( မိမိ user ID) Password – 12345 ( ဝင်ပြီးတာနဲ့ မိမိ password ကို ပြောင်းပါနော် ) ဒါအပြင် Hi Internet Facebook Page မှာလည်း Menu bar မှ Customer portal ကို နှိပ်ပြီး ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
အကြိုက်သုံးအင်တာနက်ကို မိမိကိုယ်တိုင် Onlineမှတစ်ဆင့် Formတင်ပြီးတော့လည်း ရယူနိုင်ပါပြီ
Hi-Internet ရဲ့ အကြိုက်သုံးအင်တာနက်ကို မိမိကိုယ်တိုင် Onlineမှတစ်ဆင့် Formတင်ပြီးတော့လည်း ရယူနိုင်ပါပြီ….. အောက်ပါပေးထားတဲ့ Link မှတစ်ဆင့် မိမိတို့တပ်ဆင်ချင်တဲ့ Packages အသီးသီးကို ရွေးချယ်၍ မှာယူနိုင်ပါတယ်.. Link 👉🏼 https://bit.ly/hiinternetform Online Form ဖြည့်တဲ့အခါ မိမိတို့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက် အပြည့်အစုံကို မှန်မှန်ကန်ကန် Video တွင် ပြထားသည့်အတိုင်း- 🔹အမည်၊ နေရပ်လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ နေထိုင်သည့်မြို့နယ်နှင့် တပ်ဆင်မည့် Packageကို သေချာြဖည့်သွင်းပြီးနောက် Submit ကိုနှိပ်ပြီးဝယ်ယူနိုင်ပါပြီခင်ဗျာ…. ကျွန်တော်တို့ဘက်မှ (၂၄) နာရီအတွင်း Form ကိုစီစစ်ပြီး လူကြီးမင်းတို့ထံ ပြန်လည်ဆက်သွယ်ပေးမှာ ဖြစ်တာကြောင့် အခုပဲ Form ဖြည့်ပြီး Hi-Internet ရဲ့ အကြိုက်သုံးအင်တာနက်ကို အရယူလိုက်ပါ….
Hi Internet အကြောင်း ပိုမိုသိရှိရန်